U hoggaansanaanta Xashiishka iyo Baahiyaha Sharci yaqaan Peoria | Thomas Howard
Sharci ahaan, ciyaartoy waaween ayaa sidoo kale soo galay warshadaha maxaa yeelay way cadahay in xashiishadda cannabis ay tahay warshado qaali ah. Dhammaan tilmaamayaasha ayaa ah in suuqa uu si xawli ah ugu kori doono, maalgashadayaashana warshadan ayaa sii wadi doona inay sii weynaadaan sanadaha soo socda.
Ku saabsan Shinnida Iibsiga
Ereyga abuur si loo iibiyo waxaa la soo saaray ka dib markii qawaaniin dowladeed cusub ay dejisay gobollo kaladuwan oo u baahna soosaarayaashu inay raadraacaan soo saarkooda Nidaamka abuur si loo iibiyo ayaa u saamaxeysa soosaarayaasha in ay si sax ah u ogaadaan halka ay badeecadu ka timid iyo halka ay u socoto. Tani waxay gacan ka geysaneysaa buuxinta shuruudaha sharciga iyada oo waliba u sahleysa iyaga inay qanciyaan shuruudaha macaamiisha.
Thanks to nidaamyadan, macaamiisha waxay helayaan macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan culeyska iyo tayada guud ee wax soo saarka dhamaadka. Intaa waxaa sii dheer, cabirrada ayaa lagu dhex darayaa abuur illaa nidaamka iibka si looga caawiyo go'aaminta qiyaasta loo baahan yahay daaweynta iyo maaraynta xaaladaha caafimaad ee kala duwan.
Xitaa si ka sii fiican, nidaamyadu waxay ku daraan koodh-ka-fudud oo u fududayn kara raadinta badeecad kasta oo xaq ah min abuur ilaa heer iib ah. Taas macnaheedu waa in qof kasta oo ka socda macaamilka ilaa milkiilaha ganacsiga uu si dhakhso leh u go'aamin karo tayada badeecad kasta oo cannabis ay la soo xiriiraan.
Ma u baahan tahay Qareen u hoggaansanaanta Xashiishadda?
Haddii aad ku jirto ganacsiga xashiishadda ama aad rabto inaad gasho warshadaha, waxaad u baahan tahay qareen u hoggaansan xashiishadda. Xitaa haddii aad sameysay baaritaano ku saabsan asaaska, oo aad aqriso dhamaan waxa jira oo ku saabsan warshadaha; waxaa jira fursad aad ku seegi karto faahfaahin faafin kara ganacsigaaga.
Marka la eego sharciyada xashiishadda cannabis gobolba gobol kale ayey uga duwan yihiin, qareen u hogaansanaanta xashiishadda ayaa kaa caawin doona inaad fahanto qawaaniinta iyo qawaaniinta gobolka meheraddaadu ku taal. Maaddaama ay sharciyadu sii wadaan horumarka, qareenka ayaa waliba kaa wargelin doona waxyaabaha ka dhacaya wershadan. Qaabkaan, waxaad helaysaa waqti fudud inaad ku ekaato dhinaca midig ee sharciga.
Waxaan nahay shirkad sharci ku saleysan Peoria, Illinois. Magacaygu waa Qareenka Thomas Howard, waxaanan la shaqeeyaa koox qareeno ah oo fahmaya qaanuunka warshadaha xashiishadda. Waxaan dhowr sano ku jirnay ganacsiga waxaanan gacan ka siiney milkiilayaasha ganacsatada xashiishadda inay sameystaan ​​oo ay socodsiiyaan ganacsigooda.
Waxaan diyaar u nahay inaan kugu hagno howlaha bilowga iyo ka shaqeynta ganacsiga xashiishadda oo aan ku fahamno nooca abuur u iibinta xashiishadda. Waxaan sidoo kale kugu hagi doonnaa sida aad ugu dari karto abuur abuurka nidaamyada iibka faa'iidooyinka ganacsigaaga.
Ma su'aal ka qabtaa ganacsiga xashiishadda iyo shuruudaha sharciyeed? Nala soo xiriir si aad u hesho macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan tan iyo waxbadan oo dheeri ah.